Bangaki Ubuso ku-imeyili yakho yakamuva? | Martech Zone
NgoLwesithathu, Agasti 3, 2011 NgoMgqibelo, Okthoba 29, 2011 Douglas Karr
Ngithola ama-imeyili afanele angaphezu kuka-100 ngosuku… Ngiyazi ukuthi kuyaphazamisa lokho. Kuyaphazamisa ikakhulukazi uma i-imeyili ingeyona leyo nto efanelekile. Kunjalo ngalawa ma-imeyili e-LinkedIn angitshela ngabantu bakunethiwekhi yami abashintshe iziqu zemisebenzi. Angikwazi ukuzibamba kodwa ngithwebule ubuso bese ngichofoza ukuze ngibheke ukuthi kwenzekani ngalaba bantu nangemisebenzi yabo. Nginesiqiniseko sokuthi le imeyili ye-LinkedIn inezinga eliphakeme kakhulu lokuchofoza embonini ye-imeyili.
Ngithola ama-imeyili usuku lonke kusuka ekuxhumaneni nomphakathi ngamagama nezinguquko zezimo zabantu abakuwo, kepha kuyaqabukela ngimba ngijule. Uma kunesithombe, noma kunjalo, ngisheshe ngicindezeleke futhi kufanele ngichofoze. Kungenza ngizibuze… ngabe uke wabona noma yiziphi izibalo kuma-CTR ama-imeyili anezithombe (hhayi izithombe zesitoko) zabantu? Ukuqagela kwami ​​ukuthi uma ubeka i- ubuso bangempela kuma-imeyili akho, cishe uzothola imiphumela yangempela.
Aug 4, 2011 ku-7: 15 AM
Ngabe usho ngokungeza isithombe kusiginesha?
Aug 4, 2011 ngo-8: 04 PM
Mhlawumbe kusiginesha, uKenneth! Ngicabanga ukuthi izithombe zabantu zihlala ziphoqelela - ziphoqa kakhulu kunombhalo.
Aug 5, 2011 ku-12: 06 AM
Mhlawumbe isithombe sesiginesha! Ngicabanga ukuthi abantu kungadingeka ukuthi baskrolele phansi ngenxa yalokho. Ngifisa ukwazi ukuthi ngingezi noma cha izithombe zamakhasimende nabasebenzi kumane kusize ukwenza ngezifiso i-imeyili futhi kuyenze ikhange kakhulu kubafundi. Kuyinto esingase sidinge ukuyivivinya!